Ny fampandrosoana ny e-commerce amin'ny Internet dia nahatonga ny orinasa hose hose maro hifaninana amin'ny "fiaran-dalamby" amin'ny e-commerce, ary ireo mpanamboatra hosoka dia mijoro amin'ny fiantraikan'ny e-varotra miaraka amin'ny tombony tokana, koa ireo orinasa hose dia mamolavola fantsona an-tserasera Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny manamafy hatrany ny fananganana fantsom-pifandraisana ivelan'ny Internet, mba hahafahan'ny mpamokatra tsirairay mitazona hatrany ny fandrosoan'ny vanim-potoana, mba ahafahan'ny orinasa mandroso bebe kokoa.
Ny fifangaroana vy vita amin'ny vy dia vita amin'ny vy avo lenta, ary ny dingana vita amin'ny fanamboarana dia somary tsara. Rehefa avy nandao ny orinasa izy ireo dia voatsapa fanaraha-maso hentitra marobe. Milamina sy azo itokisana izy ireo ary manana hery manohitra fanoherana mahery vaika ary mivaingana. Ny vokatra dia manana endrika tsara tarehy, fampandehanana mora, torolàlana maimaim-poana ary amin'ny tory amin'ny ankapobeny. Ny sisin'ny close hidina dia malama ary tsy mandratra ny hidro. Manjary ny fotorana ary azo averina ny zatra ny hidrozy. Noho izany, ny fametahana vy vy vita amin'ny vy dia ampiasaina amin'ny fampifandraisana ireo fantsona mafy sy malefaka, ary be mpampiasa dia ampiasaina eo amin'ny serasera solika, setroka sy ranon-tsolika amin'ny fitaovana mekanika isan-karazany toy ny fiara, traktera, sambo, milina misy lasantsy, milina maty. ny famafazana ary ny fanamboarana fanamboarana Ny fifandraisan'ny mpanjaitra, sns, no voalohany amin'ny karazana fifandraisana amin'ny hose
Fomba fametrahana maromaro amin'ny clampose hose
Fomba fametrahana mety: Ny fametahana hose dia tokony hapetraka arakaraka ny sandan'ny torsiana natolotry ny mpanamboatra.
Fomba fametrahana diso
1. Na dia azo fehezina ihany koa ny fametahana ny hose dia ny sandan'ny torsizy mety tsara, ny fiitaran'ny fanitarana dia miasa eo ambany tsindry, izay mahatonga ny fifohazan'ny selika hianjera amin'ny sisin'ny hosotra ary amin'ny farany dia mahatonga ny hidi-posefoana.
2. Na dia azo fehezina mandritra ny fotoana mety aza ny fametahana ny hose dia ny fanitarana ny hosotra ary ny fantsom-pifandraisana eo an-toerana dia hanery ny fifindran'ny hosotra mba hivezivezy, ka hiketrika ny hose.
3. Na dia mety ho hamafisina ihany koa ny fametahana ny hose, dia ny fanitarana, ny fanakorontanana ary ny fantsom-baravarana eo an-toerana dia hahatonga ny rindrina hose hamono ny hery manapaka, ary izany ihany koa dia manimba ny herin'ny fihongo. Ny familiana ny hose dia mitohy mangovitra ary avy hatrany dia mahatonga ny fihosinan'ny hidina.